We.com.mm - ၂၀၁၉ ရဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သရုပ်ဆောင် (၁၈) ယောက်
တချို့က အနုပညာရှင် လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ ချမ်းသာတာဖြစ်ပြီး တချို့ကတော့ အနုပညာရှင်မလုပ်ခင်တည်းက ချမ်းသာလာကြတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနုပညာလောကမှာ ထူးချွန်ပြီး ပရိသတ်များစွာရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့
၁၈. Brad Pitt (USA)
သူ့အကြောင်းကတော့ အထွေအထူး မပြောတော့ပါဘူး။ ဂျိုလီရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်း ဘရက်ပစ်ရဲ့ လက်ရှိပျဉ်းမျှ ငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၄၀ ပါ။
၁၇. Leonardo Dicaprio (USA)
ကောင်မလေးတော်တော်များများရဲ့ အသည်းကျော် Titanic မင်းသား လီယိုနာဒိုကတော့ နံပါတ် ၁၉ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ခုထိလည်း ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေရိုက်ပြီး နာမည်ကျော်ကြားနေဆဲ ခန့်ချောကြီး။ သူ့ရဲ့ ပျဉ်းမျှပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ဒေါ်လာ ၂၄၅ သန်းပါ။
၁၆. Robert Downey Jr. (USA)
MCU ရဲ့ဖခင်ကြီး RDJ ကတော့ နံပါတ် ၁၆ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ ပါ။
၁၅. Will Smith (USA)
Hancock, Man in Black နဲ့ Suicide Squad စတဲ့ Will Smith ရဲ့သဘာဝလွန် အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူပေါ့။ သူ့ရဲ့လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၆၀ ပါ။
၁၄. Mia Wasikowska (Australia)
Alice In Wonderland ဇာတ်ကားရဲ့မင်းသမီးလေး မီယာကိုလည်း သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကလည်း Rich Kid ပါပဲနော်။ သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ ၂၇၅ သန်း ရှိပါတယ်။
၁၃. Adam Sandler (USA)
အချစ်ဇာတ်မြူးကားတွေ၊ ဟာသကားတွေ ရိုက်တဲ့ အာဒမ်ကတော့ နံပါတ် ၁၃ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ မထင်ရဘူးနော်။ သူ့ရဲ့လက်ရှိ ပျမ်းမျှ ငွေပမာဏက ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂. Mary-Kate and Ashley (USA)
အိုလ်စင် အမွှာဆိုပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ ကိတ်နဲ့ အက်ရှလေကတော့ အမေရိကန် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေ ဖြစ်သလို၊ ကလေးသရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့ဖူးသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ New York Minute ဇာတ်ကားကတော့ လူကြိုက်များပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ ၃၀၅ သန်းရှိပါတယ်။
၁၁. Micheal Douglas (USA)
အမေရိကန် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဒါရိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဆုပေါင်းများစွာ ရရှိထားတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ ၃၁၅ သန်းပါ။
၁၀. Tom Hanks (USA)
အနှစ်သာရရှိတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းများစွာကို ရိုက်လေ့ရှိပြီး ဆုပေါင်းများစွာလည်း ရရှိထားတဲ့ မင်းသားကြီး တွန်မ်ဟန့်ကတော့ နံပါတ် ၁၀ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပျှမ်းမျှငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ ရှိပါတယ်။
၉. Clint Eastwood (USA)
သရဲကား၊ စုံထောက်ကား၊ အက်ရှင်ကား၊ ဒရာမာ၊ ဟာသ၊ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမဆို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူပါ။ အဆိုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလင့်ရဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ဒေါ်လာ ၃၇၅ သန်းပါ။
၈. Jackie Chan (China)
သိုင်းလောကရုပ်ရှင်ရဲ့ ဆရာတစ်ဆူ ဂျက်ကီချမ်းကတော့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးထားနိုင်သူပီပီ ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း နည်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဂျက်ကီချမ်းရဲ့ လက်ရှိ ငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ ၃၉၅ သန်းဖြစ်ပါတယ်။
၇. Sylvester Stallone (USA)
20 Born တွေတော့ မှီမလားမသိဘူး။ ခုခေတ်မှာ ဂိမ်းတွေကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်သလိုပဲ။ စတားလုံးက ရမ်ဘိုဂိမ်းရဲ့မင်းသားပေါ့။ ဗလကောင်းကောင်း ခပ်ချေချေရုပ်နဲ့။ ခုတော့လည်း အကျပိုင်းရောက်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပူစရာမလိုပါဘူး။ သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ တောင်ရှိတာလေ။
၆. Jack Nicholson (USA)
အနုပညာသက်တန်း နှစ်(၆၀)ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုပေါင်းများစွာလည်း ရရှိထားသူပါ။ သူ့ရဲ့ယခုလက်ရှိငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ သန်း၄၁၀ ပါ။
၅. Mel Gibson (USA)
သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူ၊ ဒါရိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Mad Max နဲ့ Martin Riggs ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ဟီးရိုးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရင်း လူသိများလာတာပါ။ မယ်လ်ကတော့ လက်ရှိမှာ ဒေါ်လာ ၄၂၅ သန်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
၄. Amitabh Bachchan (India)
အင်ဒီးယား ရုပ်ရှင် ဘိုးအေကြီး အမီတာ ဘက်ချမ်းကတော့ နာမည် ၄ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ဒေါ်လာ ၄၂၅ သန်းပါ။
၃. George Clooney (USA)
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဖူးသူဖြစ်ပြီး ဆုပေါင်းများစွာလည်း ရရှိထားသူ ဂျော့ရ်ှကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ လက်ရှိမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
၂. Tom Cruise (USA)
အမေရိကန် သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တွန်မ်ခရုစ်ကိုတော့ အက်ရှင်ကား တော်တော်များများနဲ့ လူကြိုက်များသူပါ။ မင်းသားချော တွန်မ်ရဲ့လက်ရှိ ငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၅၅၀ ပါ။
၁. Shah Rukh Khan (Inida)
ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အချမ်းသာဆုံး မင်းသားကတော့ ရှာရွတ်ခမ်းပါတဲ့။ အမေရိကန်မင်းသားတွေတောင် ကျန်ခဲ့ပါပြီနော်။ သူ့ရဲ့ပျမ်းမျှ ငွေပမာဏကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၇၅၀ ပါ။
Ref: Dream Angel
ချစ်ရသူနှင့် ရွှေလက်တွဲလိုက်တဲ့ Meghan Trainor
(★BREAKING) အဆိုတော်Gummy နဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား Jo Jung Suk တို့ လက်ထပ်ကြတော့မယ်
2018 နောက်ဆုံးလအထိ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအဆိုတော်အဖွဲများ
7 months ago by Ei Mon